» साढे ५ हजार मुसा मार्न अढाई करोड खर्च !
साढे ५ हजार मुसा मार्न अढाई करोड खर्च !
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार ०६:२४
मुसा मार्नका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिएको समाचार सुन्दा अचम्म लाग्न सक्दछ । तर अचम्म मान्नु पर्दैन । किनकी भारतको रेलवे विभागले झण्डै साढे ५ हजार मुसा मार्नका लागि डेढ करोड भारुभन्दा धेरै रकम खर्च गरेको छ । वास्तवमा भारतीय रेलवेलाई मुसाको बढ्दो संख्या टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । त्यसैले मुसा नियन्त्रणका लागि रेलवे विभागले पछिल्लो समय पैसाको खोलो बगाउन थालेको छ ।
समाचारअनुसार रेलवेले पछिल्लो ३ वर्षमा मुसा नियन्त्रणका लागि १ करोड ५२ लाख भारु खर्च गरेको छ । त्यो भनेको झण्डै अढाई करोड नेपाली रुपैयाँ हो । तर दुःखको कुरा के भने करोडौं रकम खर्च गर्दा पनि रेलवे विभाग अझै मुसाको पीडाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । किनकी १ करोड ५२ लाख ४१ हजार ६८९ भारु खर्च गर्दा तीन वर्षमा जम्मा ५ हजार ४ सय ५७ वटा मात्र मुसा मारिएको छ ।